ပိုလန်နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 52°N 20°E﻿ / ﻿52°N 20°E﻿ / 52; 20
ပိုလန်နိုင်ငံ (တရားဝင်အခေါ်အားဖြင့် ပိုလန်သမ္မတနိုင်ငံ) သည် ဥရောပအလယ်ပိုင်းတွင် ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် ချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ နှင့် လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဘော်လကန်ပင်လယ်၊ ရုရှားနိုင်ငံမှ ကာလီနင်ဂရင် အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ တို့ တည်ရှိကြသည်။ ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းမှဦ ၃၁၂,၆၇၉ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၁၂၀,၇၂၆ စတုရန်းမိုင်) ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၆၉ခုမြောက် အကြီးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်ကာ ဥရောပတွင် နဝမမြောက် အကြီးဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ပိုလန်တွင် လူဦးရေ ၃၈ သန်းမျှ ရှိသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၃၄ ခုမြောက် လူဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ တွင် ဆဋ္ဌမမြောက် လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကွန်မြူနစ်စနစ် အလွန် နိုင်ငံများတွင် လူဦးရေ အများဆုံးသော နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။
Rzeczpospolita Polska (ပိုလန်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "Mazurek Dąbrowskiego"
(အင်္ဂလိပ်: "Poland Is Not Yet Lost")
ပိုလန်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရင့်)
– ဥရောပတိုက်အတွင်း (green နှင့် မီးခိုးရင့်)
၉၈% ပိုးလူမျိုး[note ၁]
၂% အခြား သို့မဟုတ် မဖော်ပြခဲ့
• ပိုလန်အား ခရစ်ယာန်ဝါဒ သွတ်သွင်းခြင်း[မှတ်စု ၁]
၉၆၆ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၄ ရက်
၁၀၂၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၈ ရက်
• ပိုလန်-လစ်သူရေးနီးယား ဓနသဟာယနိုင်ငံ
၁၅၆၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်
• ပိုလန်အား စိတ်ပိုင်းခြင်း
၁၇၉၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်
၁၉၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်
၁၉၃၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်
၁၉၈၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်
၃၁၂,၆၉၆ km2 (၁၂၀,၇၃၃ sq mi)[မှတ်စု ၂] (အဆင့်: ၆၉)
၁.၄၈ (၂၀၁၅ ခုနှစ်အရ)
၃၈,၂၆၈,၀၀၀ (အဆင့် - ၃၈)
၁၂၃/km2 (၃၁၈.၆/sq mi) (အဆင့် - ၈၃)
$၁.၄၁၂ ထရီလီယံ (အဆင့် - ၁၉)
$၃၇,၃၂၃ (အဆင့် - ၃၉)
$၆၅၅ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၂၂)
$၁၇,၃၁၈ (အဆင့် - ၄၄)
↑ The adoption of Christianity in Poland is seen by many Poles, regardless of their religious affiliation or lack thereof, as one of the most significant events in their country's history, as it was used to unify the Polish tribes.
↑ The area of Poland, as given by the Central Statistical Office, is ၃၁၂,၆၇၉ km2 (၁၂၀,၇၂၆ sq mi), of which ၃၁၁,၈၈၈ km2 (၁၂၀,၄၂၁ sq mi) is land and ၇၉၁ km2 (၃၀၅ sq mi) is internal water surface area.
↑ Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 [National-ethnic, linguistic and religious structure of Poland. National Census of Population and Housing 2011] (PDF) (ပိုလန်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Central Statistical Office။ 2015။ ISBN 978-83-7027-597-6။
↑ Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 [Population. Number and demographical-social structure. National Census of Population and Housing 2011] (PDF) (ပိုလန်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Central Statistical Office။ 2013။ ISBN 978-83-7027-521-1။
↑ Poland - The World Factbook (22 September 2021)။
↑ Christian Smith (1996)။ Disruptive Religion: The Force of Faith in Social-movement Activism။ Psychology Press။ ISBN 978-0-415-91405-5။9September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး – via Google Books။
↑ The Act of December 29, 1989 amending the Constitution of the Polish People's Republic.။ Internetowy System Aktów Prawnych။ (in ပိုလန်)
↑ GUS။ Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku။
↑ Concise Statistical Yearbook of Poland, 2008။ Central Statistical Office (28 July 2008)။
↑ demografia.stat.gov.pl/။ Population. Size and structure and vital statistics in Poland by territorial division. As of December 31, 2019။ 18 June 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ ၁၁.၃ World Economic Outlook Database, October 2021။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပိုလန်နိုင်ငံ&oldid=729046" မှ ရယူရန်
၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၂၀:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၂၀:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။